कञ्चनपुरमा ४ जना केटाहरुले एक एकजनालाई यसरी कुटेर फालेपछि प्रहरीले पक्रिन जाँदा उल्टै प्रहरी पनि कुटेपछि.. - Dainik Link
कञ्चनपुरमा ४ जना केटाहरुले एक एकजनालाई यसरी कुटेर फालेपछि प्रहरीले पक्रिन जाँदा उल्टै प्रहरी पनि कुटेपछि..
August 25, 2020 adminLeaveaComment on कञ्चनपुरमा ४ जना केटाहरुले एक एकजनालाई यसरी कुटेर फालेपछि प्रहरीले पक्रिन जाँदा उल्टै प्रहरी पनि कुटेपछि..
कन्चनपुर, ९ भदौ । दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरबाट सोमबार प्रहरीमाथि हातपात गरिएपछि चार युवा पक्राउ परे । प्रहरी हिरासतमा राखिएका उनीहरु सबै १८ देखि २० वर्ष सम्मका छन् । प्रहरीले उनीहरु माथि अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
तिनै चार युवाको कुटपिटबाट बेहोस भएर भुँईमा ढलेका स्थानीय गणेश खत्रीको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । केही स्थानीयले उनलाई हेरि रहेको सार्वजनिक तस्बिरमा देखिएको छ ।
स्थानीय खत्रीलाई कुटपिट गरी बेहास भएपछि उनीहरु हिँडेका थिए । उनलाई कुटपिट गर्नेमा स्थानीय शिव सुनार, प्रेम सुनार, अनिल सुनार र राजेश सुनार छन् ।
कुटपिट गरी खत्रीलाई बेहोस बनाएको जानकारी आएपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक दान सिह धामीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली देउराली घाट पुगेको हो । प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न चारै जनालाई खोजी गरी सोधपुछ गर्ने क्रममा उनीहरुले प्रहरीमाथि कुटपिट गरे ।
उनीहरुले प्रहरी सहायक निरीक्षक धामीको नाकमा हिर्काए । धामीको नाकबाट रगत बग्न थाल्यो । प्रहरी हवल्दार रमेशराज भारतीमाथि कुटपिट गर्दैैै कमिज च्याति दिए ।
प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि तत्काल चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय ल्याइयो । उनीहरुमाथि इलाका प्रहरी कार्यालयमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाईको छ ।
ती युवा र खत्रीबीच झगडाको कारण खुल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आपशी रिसिइबी हुन सक्ने देखिएको बताए । ‘के कारणले हो भन्ने त खुलेको छैन, प्रहरीले बुझ्दैछ, आपशी केही रिसिइबी हुन सक्छ’ उनले भने ।
कुटपिटबाट घाइते खत्रीको अहिले धनगढीमा उपचार भई रहेको छ । उनको घर परिवारले पनि ती युवामाथि जाहेरी दिने तयारी गरि रहेका छन् । प्रहरीले एम्बुलेन्स खोजेर खत्रीलाई उपचारका लागि धनगढी पठाएको थियो । पश्चिमटुडे
भर्खरै कैलालीकाे गाैरीफन्टा नाकाबाट फेरी बाहिरियाे कल्पना नगरेकाे खबर, अब के हाेला? यस्ताे..
कैलालीः भारतबाट फर्किने बेला गाैरीफन्टा नाकामा यस्ताे भईदिएपछि सबैकाे ध्यान..
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ !
देवरले भाउजुसँग राेमान्स गरेकाे भिडियाे इन्टरनेटमा जताततै फैलिएपछि, लाैखाैँले हेरे भेडियाे..